Mawduuca - Bogga 2 - Geofumadas
Talooyinka 5 ee badbaadada qalabka sahan
Way adagtahay in aad ku qanciso madaxda wakhtigaa; in qalabka la iibsado waa in la caymiyaa ka hortagga xatooyada, dhaawaca iyo shilalka. Waa la fahmi karaa marka ugu horeysa, su'aalaha sida: Haddii kooxdu ay dib ugu soo celinayso degmada, maxaad ugu fiicnaan lahayd kharashka caymiska? Ka hortagga tuugada? Tani ma ku siinaysaa fursado ...
GPS / Qalabka, Leisure / waxyi, topografia
Drones loo isticmaalo rayidka Professional, photogrammetry in daqiiqo.
Ogaanshaha sida unugyada madaxbannaan ee maanta ay naga dhigayaan inaan ku qanacsanahay inaan ogaanno asal ahaan asal ahaan laakiin sidoo kale ka faa'iideysanaya horumar cusub. Waxay ku dhacdaa kuwa naga mid ah ee ogaa qaababka dhaqameed ee sawirqaadashada, iyo xaddidaadaheeda xun; markii wareegga xiritaanka, boobka, moodaynta iyo soo saarista badeecada kama dambaysta ah ay qaadatay todobaadyo, ...
Featured, tabo cusub, topografia
Todobaadkii la soo dhaafay waxaan la hadlay saaxiib la yiraahdo Canadian ah oo igu warramey khibradda ay isticmaaleen GIS Pro ee nidaamyada sahaminta cadawga. Waxaan ku dhawaad ​​gaadhay gabagabadii inkasta oo ay jiraan qalabyo kale, laga bilaabo waxa ku jira App Store taasi ma aha haddii aan ugu fiican u ah ee iOS, ...
Isbarbardhiga GPS - Leica, Magellan, Trimble iyo Topcon
Waa wax caadi ah, marka aad ka iibsaneyso qalabka topotography, waa lagama maarmaan in la isbarbar dhigo GPS, saldhigyada guud, software, iwm. Geo-matching.com waxaa loogu talagalay uun. Geo-gaarsiinta waa goob ka mid ah Geomares, isla shirkadaas oo daabacday majaladda "GIM International". Haddii aan xusuusto, mudnaanta sare ee majalladani waa ...
Machadka Tifaftirka ah ee horumarinta wadamada Maraykanka
Tani waa magaca ugu horeeya ee Isgaadhsiinta Maraykanka ee Aasaasiga ah ee Geographic iyo Geomatics ee lagu qaban doono Jalisco, Mexico. Munaasabadda waxaa soo kordhay 11 Kulliyadaha Meksiko ee Machadyada Fikradaha ah, waxayna ka iman doonaan 16 ilaa 18 ee Oktoobar ee 2013. Hadafka guud waa in la waafajiyo aragtida maaddooyinkaan ...
Template in la abuuro file DXF liiska Excel of dhibcood
Recently dhawaan Juan Manuel Anguita ayaa ii soo gudbiyay version cusub ee codsigaan oo aan horay u dallacsiinnay, laakiin wakhtigaan ayaa ka tagay dhibaatooyin qaar ka mid ah version cusub ee Excel. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, laakiin shaqeeyn heer sare ah. Waa inaad gashaa lambarka dhibic, isku duwid x, y, z; Waxaan dhigay ...
Sokkia Tilmaame 50 Buugga Wareejinta Wadarta
Qaar ka mid ah waqti ka hor socday in muddo ah raadineysa buugan, bilood ka dib markii aad i helay akhristaha iyo u yimid. Waxaan soo laabtay Nicmada, waa in laga lalmiyaa halkan si ay u soo dejisan kartaa. Waxaa buuggan operator ee, sarkaalka Sokkia ee Spanish, loo isticmaalo qalabka: Series50RX SET250RX SET350RX SET550RX SET650RX Series50X SET250X SET350X ...
Downloads, GPS / Qalabka, topografia
Aqoonsi, saxan qiyaasta qiimaha gaaban GPS
Dhawaan waxa la soo bandhigay Shirkadda ESRI ee Spain, kaliya toddobaadkii hore iyo tan xigta waxay ku jiri doontaa TopCart ee Madrid. Waa nidaam dejinta GPS iyo nidaam cabbir ah oo taageera kobcinta ka dib, taas oo lagu ogaan karo saxnaanta santimarka. Ma jiraan wax kale oo aan ...
Miisaan isbarbardhiga oo ku dhow xeryaha guud ee 50
GeoInformatics ayaa noo yaabay bishan la edition ah oo muujinaya 49 saldhigyada guud ahaan kala duwan ee miis la barbardhigo in uu noqon karaa waxtar u leh kuwa u baahan yihiin inay go'aan waqtiga iibsiga iyo sidoo kale in ay ula socdaan model ah in uu leeyahay Waxaan ku kordhay laba qof ...
Ipaq PC oo ku yaal farshaxanimada isdhexgalka iyo Istaraatiijiyada Wadarta
Waxaan maqlay of this, laakiin in this video in Nooga keeno saaxiib, taas oo muujinaysa Ipaq iyo sare qalab dibadda ku xiran Semiestación iyo Total Station. In this video ah su'aalaha ugu badan ee la weydiiyay by xirfadlayaasha berrinkii sahan iyo ad-injineernimada on sifooyinka ah Ipaq iyo cinwaanada ...
Waxaa la bilaabay Bentley Descartes v8i cusub
Waxaa lagu dhawaaqay shuruudaha cusub ee SELECTseries 3 ee Bentley Descartes, oo aan horey u fileynay maalmo ka hor. Sidaas awgeed waxaan soo bandhigi doonaa saxaafadda rasmiga ah ee Bentley Systems. HOUSTON - SPAR International - Abriil 16, 2012 - Bentley Systems, Incorporated, shirkad hormuud ah oo loogu talagalay bixinta xalal dhamaystiran oo software ah si loo sii wado ...
tabo cusub, Microstation-Bentley, topografia
Qaar ka mid ah waqti ka hor waxaan la hadlay of Tools Plex.Earth for AutoCAD, qalab xiiso leh in marka laga reebo dejinta, la abuuro mosaics images georeferenced iyo iskaan si sax ah, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa dhowr joogtada caadiga ah ee degaanka of muuqaalka guud ee dhulka. Waqtigan waxaan rabaa in aan tuso jiilka xuduudaha ka soo jeeda Google Earth. Malaha xaqiiqda ...
Isku Aadka geesoolayaasha leh tilmaamaha iyo masaafo ka Excel in Microstation
A dhowr sano ka hor waxaan la daabacay maqaal muujinaya sida loo concatenate xogta ee Excel si ay u dhisaan geesoolayaasha leh AutoCAD oo aan haysan in la sameeyo hab maamuuska oo dhan: @distance <xagal .... Maalintii kale waxaan ku jirnay koorsada AutoCAD, qof ayaa i weydiiyay haddii taasi la sameyn karo khadka taleefanka Microsation. ...
Congress of Land Management iyo Surveying
25 27 si October ee 2011 waxaa la diyaarin doonaa in Guatemala, Congress Labaad ee sahan iyo Maamulka Land hoos magaca "duwashada xubnihii maamulka iyo horumarinta dhulka". Iyada oo ku qanacsanaanta weyn aan kor arrintan, taas oo ku darayaa in isbedel joogto ah sannadihii la soo dhaafay in this dalka, halkaas oo ...
cadastre, Maamulka Land, topografia